Omenala Plastic Ebu Manufacturers na Suppliers - China Custom Plastic Ebu Ebu Factory
OEM plastic injection ebu na-ere
Omenala plastik emere bụ ngwa eji arụ ọrụ ọtụtụ ngwaahịa iji mepụta akụkụ plastik. Ebu ga-ahaziri ma mepụta ya iji mepụta ọtụtụ puku akụkụ plastik na ndụ ngwaahịa a.
OEM nkenke Plastic akpụzi / akpụzi China Manufacturer
Ndị ọrụ anyị nwere ahụmịhe n'ichepụta na imepụta ụdị ebu dị iche iche.
Site n'inwe mmekọrịta chiri anya na ndị ahịa, nwere ike hụ na ụdị izizi nke ngwaahịa ikpeazụ kachasị nke zuru oke.
YF akpụzi nye omenala injection ebu n'ichepụta ọrụ dị ka gị ina nke tooling nkọwa.
Yuanfang e amị omenala elu-edu plastic injection ebu maka ahịa gburugburu ụwa kemgbe 1996.
Omenala ebu Ọgwụ Ọgwụ na ịkpụzi Custom High nkenke Ọgwụ na ịkpụzi ụlọ ọrụ
Anyị bụ ndị na-eduga Chinese injection ebu onye nke na-enye elu-edu omenala ebu n'ichepụta na nkenke plastic injection ịkpụzi ọrụ.
Anyị bụ ndị ọkachamara nwere oke ọkụ ịchọta ụzọ kachasị mma maka usoro nrụpụta plastik maka ndị ahịa ọ bụla, ngwaahịa ọ bụla, mmefu ego, oge na ebumnuche ya. Ndị otu anyị tolitere na nsogbu ma nwee ọfụma na ọrụ ndị siri ike.
Omenala plastik emere bụ ngwa eji arụ ọrụ ọtụtụ ngwaahịa iji mepụta akụkụ plastik. Ebu ga-ahaziri ma mepụta ya iji mepụta ọtụtụ puku akụkụ plastik na ndụ ngwaahịa a. A na-eji ọtụtụ ígwè akpụ aluminom, aluminom, ma ọ bụ alloys ndị ọzọ. Ebu ígwè dị oke ọnụ, mana ha na-adịru ogologo oge ma nwee ike mepụta ọtụtụ akụkụ n'ọtụtụ buru ibu. Dabere na ebumnuche nke akụkụ ahụ, nchara ma ọ bụ aluminom dị ala nwere ike ịbụ nhọrọ dị ọnụ ala karịa, karịsịa ma ọ bụrụ na olu achọrọ nke akụkụ ahụ dị obere.
Yuanfang Technology, a Chinese ebu emeputa dị na Shenzhen, ewepụtara na ọgwụ ebu tooling, n'ichepụta na plastic injection ịkpụzi ọrụ, awade omenala ọgwụ akpụ Ndinam na plastic akụkụ mmepụta maka zuru ụwa ọnụ ụlọ ọrụ.
• CAD imewe / ebu eruba analysis / DFM.
• Omenala Ọgwụ ebu.
• Plastic Ọgwụ na ịkpụzi.
• Ihe osise, mbipụta nkà, mgbakọ.
Akpụzi Factory, Ndị na-emepụta ebu ebu, Ọgwụ Nkedo na Metal Inserts, Plastic Fanye Nkedo, Omenala akpụzi, Ndị na-akpụzi ihe ntanye,